China Cosmetic tavoahangy Factory, Cosmetic tavoahangy Supplier
42ml 100ml 215ml Mahatsapa fofona Frosted Glass Refillable Diffuser tavoahangy misy satroka volafotsy
1. Tavoahangy aromatherapy avo lenta,tavoahangy diffuser volotara, kanto sy azo ampiasaina, mazava kristaly.
2. Fomba tsotra, handravaka ny trano, tavoahangy diffuser fiara.Miaraka amin'ny aromatherapy, afaka manala fofona.
3. Ny serivisy OEM dia misy foana, manampy ny mpanjifa izahay hamolavola tavoahangy izay azy.
4. Ny fahafahan'ny tavoahangy dia avy amin'ny 30ML- 1000ML, safidy bebe kokoa ho anao.
5. Misy kojakoja toy ny caps/rattan stick/fibre sticks koa misy.
6. Efa ho 200 ny tavoahangy fitaratra diffuser amin'ny endrika samy hafa ananantsika ankehitriny. Afaka maka tavoahangy ao amin'ny tranokalantsika na E-catalog ianao.
tavoahangy diffuser volotara, Tavoahangy Saosy Glass Bbq, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy vera labiera, tavoahangy ranom-boankazo,